အခြား | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
ဟွာဝေး ME906C ME906E ME906J ME906V NGFF 4G LTE ကိုကတ်၏ကွဲပြားခြားနားသောဘာတွေလဲ??
နိုဝင်ဘာလ 23, 2015 admin ရဲ့ 0
About ME906 ~ ME906 isamobile Internet access module. The module supports LTE, WCDMA, EVDO, and GSM. The product uses the M.2 interface, supports Windows7နဲ့ Windows 8.1, and is intended for laptop and tablet... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Intel ကမိုဘိုင်း CPU ကို-အမွေအနှစ်Intel® Core ™ပရို
သြဂုတ်လ 21, 2015 မောင်းသူ 0
Product Name Status Launch Date # of Cores TDP Intel® Core™ Duo Processor L2300 (2M ကကက်ရှ်, 1.50 GHz အမြန်နှုန်း, 667 MHz FSB) Interactive မှပံ့ပိုးမှု၏အဆုံး215 W Intel® Core™ Duo Processor L2400 (2M ကကက်ရှ်, 1.66 GHz အမြန်နှုန်း,... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ဒီဇင်ဘာလ 16, 2014 admin ရဲ့ 0
The card bringasmall gift for you ~ Start at 2015, you would be got gift card with your order. It isabeautiful card likeabookmark, you can hold it. The important of you are not only get more info in OS-STORE, but... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
Kodak Digital Camera – CD22 Series Zoom in on life’s greatest moments and share them quickly and easily with the Kodak EASYSHARE CD22 digital camera. With 5x optical zoom and Kodak’s smart capture... ဆက်ဖတ်ရန် | ယခု Share!
ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Intel က နည်းပညာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု HD Graphics စီပီယူ OS ကို-STORE 64-နည်းနည်းက Windows ဥပဒေရေးရာအနက် ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Software များ ပရိုဆက်ဆာ HTC က မိုဘိုင်းဖုန်း processor ​​ကို Technology_Internet Nokia က device ကိုမော်ဒယ် Samsung က